“Mooshinka Ninka keenay waa aniga, in golaha mooshin la keenaa waa sharci, in sharciyada la mariyaana waa sharci” Xildhibaan Bukhaari. |
“Mooshinka Ninka keenay waa aniga, in golaha mooshin la keenaa waa sharci, in sharciyada la mariyaana waa sharci” Xildhibaan Bukhaari.
Hargaysa(GNN):-Xildhibaan Saleebaan Cawad Cali (Bukhaari) oo ka mid ah mudaneyaasha muxaafidka ah ee xisbiga talada haya ee KULMIYE,islamarkaana hormoodka ka ahaa mooshinka ay ku doonayeen in dib looga noqdo go’aankii hore loogu laalay wareejinta haamaha kaydka shidaalka Berbera, ayaa sheegay in Guddoomiye Cirro xaq u leeyahay in mooshinkan ay maanta keenaan uu sharciga mariyo oo loo codeeyo.
Mudane Bukhaari oo xarunta Baarlamaanka kula hadlay Saxaafadda ayaa waxa uu yidhi “Mooshinka Ninka keenay waa aniga, in golaha mooshin la keenaa waa sharci, in sharciyada la mariyaana waa sharci, 38 Mudane ayaa soo saxeexay oo keenay. Guddoomiyuhu wuxuu xaq u lahaa in sharciga la
mariyo oo loo codeeyo,oo Golaha dhex-dhexaad ku hoggaamiyo oo Guddoomiye u yahay ayaa Dastuurka ku taala inuu mooshinkii shalayna yidhaahdo uma baahna, ee haddaa loo codaynayaa.” Ayuu yidhi Mudane Bukhaari.
Xildhibaan Saleebaan Cawad Cali (Bukhaari) waxa uu intaas raaciyay “Kii maantana inuu yidhaado sharcigaa la marinayaa lama keeni karo oo xeer-hoosaadka u daliishado,waxa weeyaan arbush iyo fidmo golaha laga samaynayo.” Ayuu yidhi Xildhibaan Saleebaan Cawad Bukhaari.